The Ab Presents Nepal » बलुवाटार काण्ड : पौडेललाई ‘अर्थमन्त्रीे पुरस्कार,” गच्छदारको सबै सम्पत्ति रोक्का
काठमाडौ – प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको वालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा छानविनमा परेका काँग्रेस नेता एवं पुर्व मन्त्री बिजय कुमार गच्छेदारको सबै सम्पत्ति रोक्का भएको छ ।
तर सोही काण्डमा संलग्न नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कृत गर्दै अर्थमन्त्री नै बनाउनुभएको छ । बालुटारको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराएको आरोपमा गच्छेदारलाई मुद्दा चलाइएको हो।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला मन्त्री परिषदको बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्क्तिका नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रअनुभएका गच्छेदारले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफूले ललिता निवास जाने बाटो बनाउन प्रस्ताव गर्दै मन्त्री परिषदमा फाइल पेश गरेकोे र माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट उक्त निर्णय भएको गच्छदारले नै बताउँदै आउनुभएको छ ।मैले निर्देशन माने मलाई कारवाही हुने ? अनि मलाई निर्देशन दिने, काम लगाउनेलाई केही नहुने यो कस्तो न्याय हो ? म माथि राजनैतिक प्रतिशोध साधिएको छ । मलाई अन्याय भएको छ ।गच्छेदारले भन्नुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले काठमाडौं, सुनसरी र मोरङमा रहेको गच्छेदारको सम्पत्ति रोक्का गरेको जनाएको छ । अन्य मुछिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति पनि छानविन गरीरहेको जनाईएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको यसअघि नै विभागले सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरीसकेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उपप्रधान तथा तत्कालीन भौतिक निर्माणमन्त्री गच्छदार, पूर्व मन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्री एवं सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीसहित ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलगायत १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले चलाएको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।०७६ माघ २२ मा भ्रष्टाचार आरोपमा ११० जनालाई मुद्दा दायर गरिएको थियो भने ६५ जनाविरुद्ध सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ ।
यसै प्रकरणमा संलग्न भई सरकारी जग्गा ब्यक्तिको बनाएर कमिशनमा जग्गा लिने र न्यून राजश्व तिरेर खरिद गरेको देखाउने काम बिष्णु पौडेलबाट भएको थियो । जग्गा कीर्ते काइते काण्डका मतियार, जग्गा किन्ने कार्यमा संलग्न नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल बिरुद्ध पनि मुद्धा दायर हुनु पर्ने चर्को आवाज उठेको थियो । पौडेलका छोराको नाममा आठ आना जग्गा खरीद भएको थियो । तर जग्गा फिर्ता गरेकाले भनेर उनलाई मुद्धा चलाईएन । हाल विष्णु पौडेल केप ीओलीबाट पुरस्कृत भएर अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।